Asturnaanta iyo Shuruudaha - WoopShop ®
Alaabta / 0.00€ 0
Ku soo dhowow WoopShop.com. Inta aad ka baaraneyso ama ka iibsaneyso WoopShop.com, asturnaantaada iyo macluumaadkaaga shakhsiyeed waa la ilaaliyaa oo la ixtiraamaa. WoopShop.com waxay kuu soo bandhigaysaa inay tahay adeegyadeeda ugufiican adiga iyadoo ku xidhan ogaysiisyada, shuruudaha, iyo shuruudaha bogan ku xusan.
• WoopShop.com waxay xushmeeyaan asturnaanta booqde kasta ama macmiilaha websaydhka oo si taxaddar leh amnigaaga internetka u tixgeli.
• WoopShop.com waxay aruurisaa macluumaadka waxaa kujira Emailkaaga, Magaca, Magaca Shirkadda, Cinwaanka Waddada, Lambarka Boostada, Magaalada, Dalka, Lambarka Taleefoonka, Sirta iyo wixii la mid ah, si aan uga bilowno, waxaan u isticmaalnaa cookies-ka loo baahan yahay in la soo aruuriyo oo la isku daro wadar ahaan. macluumaadka shaqsiga lagu garan karo ee ku saabsan booqdayaasha bartayada. Macluumaadka adiga ayaa kuu gaar ah. Isticmaalayaasha ayaa laga yaabaa, si kastaba ha noqotee, inay booqdaan bartayada si qarsoodi ah. Waxaan ka soo uruurin doonnaa macluumaadka aqoonsiga shaqsiyaadka kaliya haddii ay si iskood ah u gudbiyaan macluumaadka noocaas ah. Isticmaalayaasha ayaa marwalba diidi kara inay bixiyaan macluumaadka aqoonsiga shaqsiyeed, marka laga reebo inay ka hor istaageyso inay ka qeyb galaan nashaadaadka la xiriira Xarunta qaarkood.
Waxaan u ururin karnaa macluumaadka aqoonsiga shaqsiyeed isticmaaleyaasha siyaabo kala duwan, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, marka Users ay soo booqdaan bartayada, ka diiwaangeliyaan goobta, amar ku bixiyaan, ka jawaabaan sahanka, buuxinta foom, iyo ku xirnaan oo leh nashaadaadyo kale, adeegyo, astaamo ama kheyraad aan ka helno Goobtayada. Isticmaalayaasha ayaa la weydiisan karaa, sida ku habboon, magaca, cinwaanka emaylka, cinwaanka boostada.
Waxaan u istcimaalnaa macluumaadka si ay nooga caawiso ka dhigista kuugu habboon ee aad adeegsan karto, ka jawaab celinta codsiyada ama cabashooyinka, si ay nooga caawiso inaan tusno waxa adiga kugu habboon iyo inaan ku xasuusino macluumaadka cusub, alaabada leh iibka, kuubannada, dalacsiinta gaarka ah iyo wixii la mid ah. dul.
• Inta lagu jiro diiwaangelintaada, waxaa lagaa dhalan doonaa inaad na siiso magacaaga, dhoofintaada iyo cinwaanka biilashaada, lambarka taleefankaaga, iyo cinwaanka e-maylkaaga. Noocyadan macluumaadka shakhsiyeed waxaa loo isticmaalaa ujeeddooyin qaansheegasho, si loo fuliyo amaradaaga. Haddii aan dhib ku qabno markii aan fulineyno dalabkaaga, waxaan u istcimaali karnaa macluumaadka shakhsiyeed ee aad siiso inaan kula soo xiriirno.
• Waad ka bixi kartaa rukhsad adoo adeegsanaya iskuxirka wargeys kasta oo emayl ah ama habka isqorista shaqsiyeed ka dib markaad gasho.
• Waxaan ururin karnaa macluumaadka aqoonsiga ee shaqsi ahaaneed ee adeegsadayaasha markasta oo ay la macaamilaan Xarunteena. Macluumaadka aqoonsi ee aan shakhsiga ahayn waxaa ka mid noqon kara magaca biraawsarka, nooca kumbuyuutarka iyo macluumaadka farsamada ee ku saabsan habka Isticmaalayaasha Isticmaalka Xarunteena, sida nidaamka hawlgalka iyo bixiyaha adeegga Internetka ee la adeegsaday iyo macluumaad kale oo la mid ah.
• Barteena ayaa adeegsan kara “cookies” si kor loogu qaado khibradda Isticmaalaha. Isticmaalaha bogga internetka ee isticmaaleyaasha wuxuu ku dhigaa cookies-ka kumbuyuuterkiisa adag ujeeddooyinka xafidaada diiwaangelinta iyo mararka qaar si ay ula socdaan macluumaadka ku saabsan. Isticmaalayaasha ayaa dooran kara inay dejiyaan bog furahooda internetka si ay u diidaan cookies ama inay kuu sheegaan marka cookies loo dirayo. Hadday saas sameeyaan, ogow in qaybo ka mid ah Rugtu aysan sifiican u shaqeynaynin.
• WoopShop waxay aruurisaa oo adeegsataa Adeegsadayaasha macluumaadka shaqsiyadeed ujeeddooyinka soo socda:
Waxaan qaadnaa xog aruurin munaasib ah, kaydinta, iyo socodsiinta habdhaqanka iyo talaabooyinka amniga si looga ilaaliyo marin u helitaan aan la fasaxin, wax ka badalida, shaacinta ama burburka macluumaadkaaga shakhsiyeed, magaca isticmaalaha, erayga sirta ah, macluumaadka macaamil ganacsi iyo xogta ku kaydsan Barteena.
• Kama iibinno, ma ganacsanno, ama ma kiraysanno Adeegsadayaasha aqoonsiga shakhsiga ee dadka kale. Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadka guud ee iskugeynta macluumaadka tirakoobka ee aan lala xiriirineynin macluumaad aqoonsi shaqsiyeed ee la xiriira booqdeyaasha iyo isticmaaleyaasha shuraakadaheena ganacsiga, kuwa ku xiran xiriirka iyo xayeysiiyayaasha ujeeddooyinka kor lagu soo sheegay. Waxaan u adeegsan karnaa bixiyeyaasha adeegga saddexaad si ay nooga caawiyaan ka shaqeynta ganacsigeenna iyo Bogga ama maareyno nashaadyada ku saabsan noolashayada, sida dirista waraaqaha warsidaha ama sahaminta. Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadkaaga qeybaha seddexaad ujeedooyinkan xadidan awgood haddii aad adigu fasax noo siisay.
• Isticmaalayaasha waxaa laga yaabaa inay ka helaan xayeysiis ama waxyaabo kale oo ku jira Boggayaga ku xira bogagga iyo adeegyada la-hawlgalayaashayada, alaab-qeybiyeyaasha, xayeysiiyayaasha, kafaala-qaadeyaasha, shatiyeyaasha iyo qeybaha kale ee saddexaad. Annagu ma xakameyno waxa ku jira ama xiriiriyeyaasha ka muuqda bogaggan mas'uul kama nihin wax qabadyada loo adeegsado websaydhyada ku xiran ama ka socda Bartayada. Intaas waxaa sii dheer, bogaggan ama adeegyadan, oo ay ku jiraan waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo xiriiriyadooda, ayaa laga yaabaa inay si joogto ah isu beddelaan. Boggan iyo adeegyadani waxay yeelan karaan siyaasado gaar ah oo u gaar ah iyo siyaasadaha adeegga macaamiisha. Bixinta iyo is-dhexgalka websaydhka kale, oo ay ku jiraan websaydhada leh xiriirin Boggayaga, waxay ku xiran yihiin shuruudaha iyo siyaasadaha u gaarka ah websaydhka.
• Qeybtaan Nidaamka Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxay sharraxaysaa sida xogta shakhsiga ah loogu isticmaalo adeegyada lacag bixinta Apple (Apple waxay bixisaa). Intaas waxaa sii dheer, waa inaad aqrisaa shuruudaha iyo shuruudaha Apple Pay. Hawlahaaga ganacsi ee loo maro WoopShop kuma xirna Apple Inc.
• WoopShop waxay leedahay ikhtiyaar ay ku cusbooneysiiso siyaasadan qaaska ah wakhti kasta. Waxaan ku dhiirigelineynaa Isticmaalayaasha inay si joogto ah u fiiriyaan boggan wixii isbeddel ah ee ku soo kordha si loogu wargeliyo sida aan gacan uga geleyno ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed ee aan aruurino. Waad qiraysaa oo aad ogolaatay inay tahay masuuliyadaada inaad dib u eegto siyaasadan qaaska ah waqti walbo oo aad ka warhesho isbedelada.
• Adigoo adeegsanaya Bartaan, waxaad muujineysaa aqbalaada siyaasadan. Haddii aadan ku raacsaneyn siyaasadan, fadlan ha u isticmaalin Barteena. Adeegsigaaga joogtada ah ee Bogga ka dambeeya dhajinta isbeddelka siyaasaddan waxaa loo tixgelin doonaa inaad aqbasho isbedeladaas.
• Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, dhaqmooyinka boggan, ama xiriirka aad la leedahay bartan, fadlan nala soo xiriir [Email ilaaliyo] or [Email ilaaliyo]
2. Shuruudaha & Xaaladaha
• Waxaad wakiil ka tahay oo damaanad qaadeysaa inaad ugu yaraan tahay 18 sano jir ama booqanayso Site adiga oo kormeeraya waalidiintaada ama mas'uulkaaga. Adiga ayaa mas'uul ka ah kaliya helitaanka iyo adeegsiga boggan qof kasta oo adeegsanaya erayga sirta ah iyo aqoonsi asal ahaan adiga laguu xilsaaray in marin u helka iyo adeegsiga bartaas ay dhab ahaan adiga kuu oggolaatay.
• WoopShop.com ayaa ka dhoofin kara bakhaarada kala duwan. Amarada leh wax ka badan hal shay, waxaan u kala kala bixin karnaa amarradaada dhowr baakood iyadoo loo eegayo heerarka saamiga ee annaga u gaar ah. Waad ku mahadsantahay fahamkaaga.
• Marka laga reebo si kale oo loo bixiyo meel kale oo ku taal boggan ama boggaga, wax kasta oo aad soo gudbiso ama aad ugu dhejiso WoopShop.com, oo ay ku jiraan iyadoon la xadidin, fikradaha, aqoonta, farsamooyinka, su'aalaha, faallooyinka, iyo talooyinka wadajirka ah, soo gudbinta ayaa loola dhaqmi doonaa sida qarsoodi ah oo aan macaash lahayn, iyo adoo gudbinaya ama dhejinaya, waxaad ogolaatay inaad si aan sharci ahayn u rukhsayso gelitaanka iyo dhammaan xuquuqaha IP ee laxiriira iyada oo laga reebo xuquuqaha akhlaaqda sida qoraaga xaqa u leh WoopShop.com iyada oo aan wax lacag ah lagana qaadin WoopShop-na waxay lahaan doontaa lacag la’aan.
• Waa inaadan adeegsan cinwaan e-mayl been abuur ah, iska dhig inaad tahay qof aan adiga ahayn, ama haddii kale marin habaabiso WoopShop.com ama dhinac saddexaad saddexaad asal ahaan wixii soo gudbinta ama Maaddada ah. WoopSHop.com ayaa laga yaabaa, laakiin laguma khasbanaan doono in ay ka saarto ama tifatiriso wixii soo gudbinta ah oo ay ku jiraan faallooyinka ama dib u eegista sabab kasta ha noqotee.
Dhammaan qoraalada, sawirada, sawirrada ama sawirrada kale, calaamadaha batoonka, cajaladaha maqalka, calaamadaha, hal-abuurka, magacyada ganacsiga ama barnaamijyada ereyga iyo waxyaabaha kale ee ku jira websaydhka WoopShop.com wada jir ahaan, Ka kooban, ayaa iska leh WoopShop.com ama waxyaabaha ku habboon. alaab-qeybiyeyaasha. Dhamaan xuquuqaha aan si cad loo dhiibin waxaa iska leh WoopShop.com. Kuwa xadgudbay waa la ciqaabi doonaa ilaa sharciga oo dhan.
• Fadlan la soco in ay jiri karaan amarro qaarkood oo aynaan aqbalin karin oo ay tahay inaan baabi'inno. Labada qayboodba waxay ku heshiiyeen in, kadib amarka dirista, safarka ayaa ah mas'uuliyadda kaliya ee shirkadda seddexaad ee logistics-ka. Inta lagu jiro marxaladan, lahaanshaha buuxa ee wax soo saarka (yaasha) waxaa iska leh iibsadaha; dhammaan mas'uuliyadaha la xiriira iyo khataraha inta lagu guda jiro gaadiidku waa inuu qaadaa iibsadaha.
• WoopShop.com waxaa ku jiri kara xiriiriyeyaal bogag kale oo internetka ah oo ay leeyihiin kana shaqeeyaan qeybaha saddexaad. Waad qiraysaa in WoopShop.com mas'uul kama aha howlgalka ama waxyaabaha kujira ama ku yaal bartan oo kale.
• WoopShop.com waxay xaq u leedahay inay bedesho shuruudahan iyo shuruudaha mustaqbalka iyadoon la soo ogeysiin.
Kursiga Ilmaha Uurka MXN426.80 - MXN960.57
Rugaha Heer Sare Heerka Boomadaha Xagaaga
Dabiiciga Dabiiciga ah ee China Shaaha MXN212.65 - MXN266.46
LED Classic Colorful Changes 3D Farshaxanka Farshaxanka Design Design MXN182.76 MXN142.62
10 / 15 / 25g Xirfadlayaasha Dab-damiska Xirfadaha Mukhaadaradaha Maqasyada Xakamaynta Maqaarka
Masrax Ka Dhigashada Caalamiga ah ee Smartphone iyo Isticmaal Meel Dhig ah